Keyse: Xasan Xanafi waxaa maxkamada ciidama ka yaalla dhowr dacwo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Keyse: Xasan Xanafi waxaa maxkamada ciidama ka yaalla dhowr dacwo
7th August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta si rsami ah u sheegtay in nin la sheegay inuu ka tirsan yahay Alshabaab oo lagu magacaabo Xasan Xanafi, laguna qabtay Kenya loo heysto dacwado dhowr ah oo la xiriira dilal wariyaal.
Afhayeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya C/laahi Maxamed Muuse “Keyse” oo warbaahinta kula hadlay Mqudisho ayaa sheegay in makamadda cidiamadu heyso dacwooyin ay ninkaas kazoo gudbiyeen qoysas Soomaaliyeed.
Afhayeen Keyse ayaa sheegay in ninkaas loo heysto dilalkii loo geystay:
1- Cali Iimaan Sharma’arke oo ahaa milkiilihii shirkadda warbaahinta Hornafrik ee Alshabaab markii dambe la wareegeen.
2- Siciid Tahliil Axmed oo ahaa agaasimihii idaacadda Hornafrika
3- Sheekh Nuur Maxamed Abkey oo ahaa tifaftirihii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA.
Keyse ayaa ugu dambeyntii sheegay in marka ninkaas loo soo gacan geliyo dowladda Soomaaliya lasoo taagi doono maxkamadda ciidamada.
Ninkaan lagu sheegay Xasan Xanafi ee ay Nairobi ku qabteen ciidamada Kenya ayaa diiday inuu yahay Xasan, wuxuuna xusay in lagu khaldamay, hase ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah Kenya u weydiisatay iney usoo gacan geliso.
10-ka magaalo ee ugu khatarsan dunida (Tirsiga Muqdisho ka gashay)
Axmed Siilaanyo iyo Muuse Biixi oo isku sacab-jiiday